मन्नपका होली टोली – बाह्रथरी कुरा
मन्नपका होली टोली
बाह्र सत्ताईस कुरा (88)
सामाजिक सञ्जाल (22)
नबनौं हनुमान, जिताऔं 'गुड' म्यान
श्रीमानको थर लिनेलाई 'दासी' देख्ने 'हिप्पोक्रेट' हरु !
१२/२७ मगन्त नारायणहरु!
सलह, कलह र विज्ञता
Archives Select Month January 2021 December 2020 July 2020 May 2020 April 2020 March 2020 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 December 2018 November 2018 September 2018 April 2018 February 2018 December 2017 September 2017 August 2017 July 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016
– निक वर्डस्मीथ
सामाजिक समाजको उदयसँगसँगै आत्मिय तरिकाले चाडवाड मनाउने चलनको अस्त हुँदै गइरहेको छ। फोटो खिच्नैका लागि चाडबाड मनाएजस्तो गर्ने, दुइ चार ग्रुप फोटा र केहि थान सेल्फि खिचेर एक दुइ प्रोफाइल फोटोको जुगाड गर्ने संस्कृतिको बारेमा फेसबुक बारेको यो लेखमा चर्चा गरिएकै हो ।
यसपटक पनि शिबरात्रीको ह्याङ्ग नउत्रदैं धेरै मानिसहरु होलीको योजना बुन्न थालिसकेका थिए । त्यो मध्धे पनि आफुलाई अलि धेरै नै सामाजिक र “स्मार्ट” ठान्ने टुइटेहरुको त कुरै छाँडौं ।
यिनीहरुको हगाई भन्दा पदाई ठूलो हुन्छ भन्ने कुरो त सर्वविदितै छ । यसपालीको होलीको पनि हल्ला धेरै गरे, महिनौं लामो खडेरी पछि पहिलो बर्खा हुँदा भ्यागुताले रमाउँदै ट्वाटट्वार गरे जस्तै । अचेलका किताबको प्रचार झैं हप्तौं अघि देखि प्रोमो बजाए, लन्चप्याक भनेर चन्दा उठाए, होली विथ फेसन भन्दै टिसर्ट बनाए । खै अरु पनि के के गरे होलान्, त्यो सबै कुरो बाहिर आएन ।
तेसैले त विविध अभिष्ट राखेर काठमाडौंका प्रसस्तै ट्विटे भेला भए, १२ वर्षमा एक खेप हुने कुम्भ मेलाकै झल्को दिने गरि। र यो होलीमा टुइटेहरुले जति रङ्ग अनुहारमा दले, त्योभन्दा बढी रङ्ग मण्डपमा देखाए । टुइटेहरुको अघोषित केन्द्रीय कार्यालय, भृकुटीमण्डप (जसलाई अचेल मन्नप पनि भनिन्छ) मा आयोजित हुल्याहा होलीमा टुइटेहरुले यि र यस्ता १२ थरि रङ्ग देखाए।
यो लेखमा वर्णन गरिएको “मन्नप” एक नमुना स्थल मात्र हो, र वर्णन गरिएक ट्विटे कुनै पनि समारोहमा हुने सहभागीका प्रतिनिधी पात्र । यस्ता पात्रहरु प्राय सबै जमघटमा हुने गर्छन । त्यसैले आआफ्नो परिवेश र भेला अनुसार तत् तत् रुपमा बुझी यो लेखको दायरालाई स्वादानुसार “मोडिफाइ” गर्नुहोला भन्ने आशा हामीले लिएका छौं ।
सम्भवतः यो टुइटेहरुको सबैभन्दा कमन विशेषता हो । यसले सालाखाला ९०–९५% टुइटेलाई व्याख्या गर्छ । तर हिजो होलीमा देखिएका अलकत्रेहरु अलि विशेष थिए । यिनलाई होलीको उमङ्गमा कुनै रस थिएन, यि त्यहाँ कहाँकहाँ के–के अलकत्र्याउन पाइन्छ भनेर विशेष चनाखो रहन्थे । यिनले न एक सुकाको रङ्ग किनेर दले, न त एक कौडिको पानी । यो वर्गका टुइटेहरु या त भुईमा थुपारेको रङ्ग टिपेर हिड्थे या जसलाई लाईदिनुपर्ने ऊसँग मागेर उसैलाई लाइदिन्थे । खाजा खाने बेलामा सबसे सुरुमा लन्चप्याक टिप्ने यिनै देखिन्थे भने सबैभन्दा अन्तिममा सक्ने पनि यिनै थिए । यो वर्गकाले कम्तिमा पनि २–४ प्याकेट चाहिँ एक बसाईमै बुत्याए । यो वर्गको एक झुण्ड बियर टोलीमा पनि सक्रिय देखिन्थे जो प्रायोजकको वातै पिच्छे “हो” थप्दै बियरका क्यान रित्याउँदै थिए । यिनिहरु शून्य लगानिमा अधिकतम प्रतिफल अलकत्र्याउन सफल भए ।
यि बडा बिन्दास थिए । यिनमा न केही सुर्ता देखिन्थ्यो न केही घिडघिडो ! ठ्याक्कै बिहेका जन्ती जस्तो – शोक न सुर्ता, भोक न भकारी । बस् बाजा बजे नाच्न पाए पुग्थ्यो । कुन गित बजिराछ कस्तो नाच्नु पर्ने केही मतलब छैन, समाचार नै लाइदेको भएपनि एक सुरमा नाचिरहन्थे होलान् । तर घरिघरि चै गितले छुँदो हो अनि एक हुल सरर केटिसँग टाँसिन पुग्थ्यो त अर्को हुल केटी तानेर टाँसिदै नाच्थे । आफ्नै तालका भएतापनि यो वर्गमा घरिघरि बोकत्व गनाइरहेको हुन्थ्यो ।
यिनिहरु बडा मस्तिमा गाँजा तानेर बसिरहे! यस्तो लाग्थ्यो यिनिहरुलाई थाहा पनि छैन यो होली हो कि शिवरात्री । रङ्ग दल्नु, रमाउनु, घुलमिल हुनु जस्ता सांसारिक मायामोह त्यागेर गाँजाबाट सुरु भको यिनिहरुको होली लास्टमा बियरमा गएर टुङ्गियो । न यिनिहरुलाई को आयो के गरो के भयो भनेर केही थाहा भयो न त कसैलाई यिनिहरु छन् छैनन नै मतलब भयो, घरिघरि हावासँगै आउने गाँजाको गन्धले चै “ए अझै यतै रहेछन” भन्ने थाहा पाइन्थ्यो ।
टुइटरका हरेक कार्यक्रममा झै होलीमा पनि “बुने क्लब” का संस्थापक सदस्यहरुको सक्रिय उपस्थिति रह्यो । त्यहाँ आएका सबै केटिहरुलाई पालो र वरियताक्रमअनुसार अङ्गालो मार्ने र रङ्ग दल्ने बहानामा मुसार्ने कार्यक्रम चलिरह्यो । केहीकेहीलाई त खाली हात केटिलाई रङ्ग लाइदिएजस्तो गरेर सुम्सुम्याइरहेको अवस्थामा नङ्गे हात पनि फेला पारियो ।बुनेहरु पनि कम्ता सिपालु हुन् त ! लेग्रो तानेर “दादा” भन्दै स्यो जोडेर सम्बोधन गर्देपछि अरुको मुखाँ पनि बुजो कोचिने ।
यो होलीको बोनस अफर थियो । होली खेल्न आएका अधिकांश केटिहरु अर्धनग्न थिए । यस्तो लाग्थ्यो कि तिनिहरु होली खेल्न हैन अर्चना पनेरुलाई ठाडो चुनौती दिन आएका हुन् । एक बित्ताको कट्टु लाएर आएका केटिहरुलाई टुइटेले यति स्वादले हेरे कि धेरैले यो पनि भन्दिन सक्लान कुन केटिको तिघ्रामा कहाँकहाँ कतिवटा कोठि थिए । र यिनिहरु जहिले पनि भिड भन्दा अलि पर बसेको देखिन्थे, हुलमुलमा हराइएला भनेर हो कि बेग्लै बस्दा सबैले नोटिस गर्छन भनेर हो दैव जानुन ।
होली, रङ्ग, रमाइलो र वातचित भन्दा पर रहेका यो वर्गका टुइटेहरु फोटो खिच्न मै व्यस्त देखिन्थे । यिनिहरुलाई पनि त्यहाँ भएका अन्य र रमाइलोको कुनै मतलब थिएन । यि आफ्नै तालमा फोटो मात्र खिचाइरहेका हुन्थे – कि त सेल्फि स्टिक समातेर कि त कुनै डिएसएलआरवाला टुइटेलाई ढोगबिन्ति गरेर । यो क्याटेगोरीमा प्राय तिनै फिला देखाउने तरुनीहरु पर्दथे जसलाई जतिबेला हेर्दापनि मुख चुच्चो पारेर क्यामेरा मै जोतिइराहुन्थे । ति सबै फोटाहरु पक्कै भरे फेसबुक, इन्स्टा र टुइटरमा “ह्याबिङ्ग फन विथ फ्रेन्ड्स” भन्दै हाल्ने होलान, जब कि ति कसैलाई वरपर कोको ‘फ्रेन्ड’ भेला भाछन भनेर वास्ताकान्त थिएन । तिनका फ्रेन्ड र फलोवरलाई श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् ।
यिनिहरुलाई देखेर मलाई बडो दया लागेको थियो । “खाइ न पाइ छालाको टापी लाइ” भनेजस्तो केके न खुत्याउँछु भनेर कहाँकहाँ देखी धाएर दश काम बिताएर आएका थिए, त्यो पनि के गर्न भन्दा होली खेल्न । साथीभाई भेटघाट हुन्छ, रमाइलो हुन्छ भन्ने २ पैसे तर्क दिन सक्छन, तर के तिनिहरुको उता चै साथी थिएनन? उता होली खेल्दैनन कहिल्यै? उता चै भुत्लोभाङ्ग रमाइलो गर्दैनन्? तरुनीको फिला प्रदर्शनी छ भन्ने सुइँको पाएर त्यही हेर्न आएको भन्छन भने त कसको के लाग्छ र हैन भने यस्तो हत्ते हालेर सितिमिति गल्फ्रेन भेट्न गइन्न, होली त यत्रै सिति!!
यो अर्को कुण्ठित वर्ग हो । जिन्दगीमा कहिल्यै केटि छुन नपाएजस्तो खाली केटिलाई मात्र रङ्ग दल्न कुदिरहन्थे । हुन त यिनिहरुले केटालाई लाउँदै लाएनन भन्ने हैन, केटालाई लाउँदा रङ्ग सकिएला झैँ चुस्स छोएजस्तो मात्र गर्थे, तर केटिलाई चै ओहो! रङ्ग दलेरै स्खलित भइन्छ जसरी घोट्थे ।
यो स्वाँगे वर्ग हो । कत्ति न बिजि छु जस्तो देखाउन हो कि वरिष्ठ पल्टिन हो यसो आएर चुस्स अनुहार देखाइ २–४ जनालाई भेटेर हतार छ भन्दै गइहाल्थे । कोही चै लास्टमा आएर धेरै ठाउँ भ्याएर आएजस्तो स्वाङ्ग पार्थे । अनुहार र लुगाको रङ्ग हेर्दा चाहिँ घरमा ऐना हेर्दै आफै दलेजस्तो देखिन्थ्यो । र ति हतार छ भनेर छिटै हिडेका कतिपय होली सकेर सबै फर्कने बेलासम्म पनि मण्डप वरपर बरालिइरहेको देखिन्थे ।
यो एकदम दयनिय वर्ग थियो । यि होलीका कुनैपनि कार्यक्रममा सक्रिय भएनन (खाने बाहेक) । यि होली खेल्न किन आए मैले बुझ्न सकेको छैन र यिनिहरुको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो ति आफै पनि यो विषयमा कन्फ्युज छन् । न यिनिहरुलाई रङ्ग दलेर रमाएको देखियो, न त नाचेको देखियो, न त यिनिहरुलाई त्यहाँ देखेर कोही उत्साहित भएको नै भेटियो । आउँदा अनुहारमा अलिअलि रङ्ग अन्त कतैबाट दलेर आएका थिए, जाँदा पनि त्यति नै रङ्ग लिएर गए । आए देखि गइन्जेल त्यही कुनामा उभिनु सिवाय केही गरेनन्, घरिघरि फोटो खिच्न हुलमा मिसिने बाहेक । सम्भवतः यि नयाँ टुइटे वा कुनै ग्रुप (गुट) मा नलागेका अनाथ टुइटे वा कोही कसैलाई/कसैले नचिनेका टुइटे थिए, जो होली खेल्छु अरु टुइटे चिन्छु भन्दै आएका थिए होलान, तर नयाँ दुलही जस्तो घुम्टो ओढेर कुनामा उभिने बाहेक अरु केही गर्नसकेनन् ।
र अन्तमा, यस बाहेकका अरु कुनै वर्ग हजुरहरुले मनाएको होलीका सहभागी थिए वा हजुरहरु सरिक हुने अन्य कुनै जमघटका पात्र हुने गर्छन् भने तल कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला ।
लेखक वर्डस्मीथले यस १२थरीमा नियमित लेखको रुपमा सक्रियता जनाउने ईच्छा ब्यक्त गर्नु भएको छ । – सम्पादक मण्डल
This entry was posted in समाज and tagged वर्डस्मीथ, संस्कृती, होली. Bookmark the permalink.
One thought on “मन्नपका होली टोली”
Pingback: मन खोली… खेलौं होली ! – बाह्रथरी कुरा